मेरो देश र मेरो धर्म दुई आँखाका नानी | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मेरो देश र मेरो धर्म दुई आँखाका नानी
२०७७ बैशाख ६, शनिबार १७:१२ गते
मोहम्मद शाहिद अली
कठै! तिमीहरूलाई र, तिम्रो अज्ञानतालाई देखेर दया लागेर आएको छ । “तिमी पाकिस्तानी हौ, आतंकवादी हौ, तिमी आइते हौ, तिम्रो देश नेपाल होइन, तिमीलाई भगाउनु पर्छ” जस्ता अभिव्यक्ति दिने केही विखण्डनकारी जसले यो देश टुक्र्याउँन चाहन्छन्, टुक्रिएको हेर्न चाहन्छन् । हाम्रो देशको शान्ति खलबल्याउँन चाहन्छन्, ख़बरदार ! तिम्रो यो अपवित्र चाहना कहिल्यै पुरा हुने छैन । किनकि देशको भलाई चाहनेले कहिल्यै साम्प्रदायिक कुरा गर्दैन । जसले कट्टरतावादी सोंच राख्छ, चाहे मुसलमान हुन् या अन्य धर्मावलम्बी तिनीहरू राष्ट्रका निमित्त भाइरस हुन् ।
आरोप लगाउने मुठ्ठी भर झुण्ड, के तिमीहरूले नेपालको इतिहास पढेका छौ रु इतिहास पढेको भए कदापि यस्तो भन्ने आँट गर्दैनथ्यौ । पहिले इतिहास पढ़ । नेपाल बन्नु पहिलेको इतिहास हाम्रो पाउनेछौ । पृथ्वीनारायण शाह हुन् या ती भन्दा पहिलेका नेपाल खाल्टोका राजाहरू तिनीहरूको पालामा व्यापार गर्न, हात हतियार बनाउन, साहित्य, कला, भेषभुषा, खानपानमा विशेष भूमिका खेलेको मुसलमानको गौर्वान्वित इतिहास भेट्नेछौ । हाम्रा दादा परदादा बाइसी,चौबिसी राजाहरूका मुखिया थिए । हाम्रो इतिहास जान्न चाहन्छौ भने हनुमानढोका पुग । जहाँ शिलालेख समेत पाउनेछौ । इतिहास पहाडको मात्र नपढियोस् । तराईमधेसको मुसलमानको इतिहास पनि पढौं । जहाँ इस्लाम आएको इतिहास भेटिन्छ । सम्भवतः त्यो झन् पुरानो इतिहास हो ।
मुसलमानले यो देश टुक्राउने कल्पना समेत कहिल्यै गर्ने छैनन् । हाम्रो इतिहास पढ़ । यो देश बनाउनेमा हाम्रो बलिदान भेट्ने छौ । हरेक परिवर्तनमा हाम्रो सत् प्रतिशत हिस्सेदारी भेट्नेछौ । सदियौं पुरानो हाम्रो इतिहास खोतल्नु, देशलाई टुक्र्याउने त के मुसलमानले देशलाई आघात पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको समेत सुन्न पाउने छैनौ । हेक्का रहोस् यहाँ त “फ्रि मधेस” को नारा लगाउनेको पनि कमी छैन । तर, हामी हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताका निमित्त प्राणको आहुति समेत दिनेछौं ।
पाकिस्तान भित्रिए वा भित्राइए भन्ने समेतको आरोप लाग्छ । निः संदेह पाकिस्तानी र, हाम्रो धर्म एउटै हो । जसरी कतार र साउदी अरब या अन्य देशका मुसलमानसँग हाम्रो धार्मिक नाता छ । स्मरण रहोस् ! हाम्रो जस्तो नाता हरेक धर्मावलम्बीको नाता रहेको देशहरू पनि छन् । धर्म संस्कृति पनि एउटै छ । त्यसो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो राष्ट्रभन्दा माथि ती देशलाई राख्न सक्छौं रु ती देशका स्वार्थलाई प्रमुखतामा राख्न सक्छौं रु कदापि सक्दैनौं । हामीलाई हाम्रो देश त्यति नै प्यारो छ जति हामीलाई हाम्रो धर्म प्यारो छ । अतः म भन्छु “मेरो धर्म र, मेरो देश दुई आँखाका नानी हुन्” ।
प्रथमतः पाकिस्तान वा अन्य मुस्लिम राष्ट्रबाट कोही मुसलमान नेपाल आउँछन् भने जरूरी छैन कि उनीहरू सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ । कदापि रहँदैन । केहीसँग रहन्छ भने त्यो सरोकारवालाहरू सँग नै सिमित रहन्छ । यो आश्चर्यको विषय पनि पक्कै हैन । किनकी पाकिस्तानीलाई वैधानिक तरिकाले नेपाल आउने अनुमति हाम्रो देशले दिएको छ । वैधानिक रूपमा आउने र, वैधानिक काममा साथ दिनु या साथ लिनु अपराध पनि पक्कै होइन । तर, हाम्रो भूमि या हामीलाई प्रयोग गर्न कसैले चाहन्छ भने त्यो हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । किनकी हाम्रो इतिहास गवाह छ हामी यो राष्ट्रको रक्षार्थ प्राणको आहूती दिन तयार छौं । कदम कदाचित कुनै व्यक्तिबाट यस्ता गल्ती नै गरेछ भने त्यो नितान्त व्यक्तिको गल्ती हुन्छ र, त्यस गल्तीको सजायको हकदार पनि त्यही व्यक्ति हुन्छ नकि १२,१३ लाख जनसंख्या भएको सिंगो समुदाय । अतः यस्ता आरोप लगाउन बन्द गरियोस् ।
पाकिस्तान बनेको कति भयो र ? ७३ बर्ष । नेपाली मुसलमानको इतिहाँस कहिलेको हो रु निः संदेह सदियौं पुरानो हो ।
देश अहिले आक्रान्त छ । यस बेला मिथ्या आरोप लगाएर राज्यलाई झन् समस्यामा नपारौं । यदी देशलाई साँचो माया गर्छौं भने हामी सदियौं देखि बन्धुत्व भावना, भाइचारा, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भावका साथ हाम्रो मातृभूमिलाई अक्षुण्ण र, सार्वभौम राख्न सफल छौं । कहिं कतै कुनै २,४ व्यक्तिले जान अन्जानमा गल्ती नै गरेछन् भने पनि त्यसलाई मानवीय गल्ती सोचेर सच्याउने तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ । चाहे त्यो जुनसुकै धर्मावलम्बी हुन् । यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिने भुल कदापि गर्नु हुँदैन । यस समस्याबाट देशलाई मुक्त बनाउन हातेमालो गरौं, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौं । हाम्रो गौर्वान्वित इतिहास र, राष्ट्रिय एकतालाई थप मजवुत बनाआ‍ैं । केही गलत तत्व छन् तिनका पछाडि नलागौं । सजग र, संयमित बनौं ।